ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ နောက်ဆုံး ပေါ် ဖက်ရှင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ နောက်ဆုံး ပေါ် ဖက်ရှင်
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ နောက်ဆုံး ပေါ် ဖက်ရှင်
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Jul 13, 2011 in Copy/Paste | 29 comments
နာမည်ကျော် ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်များ အနေဖြင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှု နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို သတိထားသင့်တယ်လို့တော့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဒါမှသာလျှင် သူတို့တွေကို လေးစားအားကျ အတုယူနေကြသော မိန်းကလေးငယ်များ အနေဖြင့် အတုယူမမှားမှာပါ။
နောက်ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး ဝတ်စားဆင်ယင်တာဟာ အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်ရာလည်းရောက်ပါတယ်ဗျာ။
အဲ့ ဒိနေ့ က ကျနော်လေ..
ကျနော်လေမိန်းခလေးချင်းပေမယ့်..အတင်းအနေ နဲ့့မဖတ်မိစေလိုဘဲ..
ကျနောအနေ ကအဲ့ ဒိ နေ့ကထူပူသွားတာပဲ…
လူကြီးတွေ လို့ ပြောမလား ***သူတွေ ကြည့်တော့..ဟာပြုံးပြုံး နဲ့ 
ထပ်ရှိသေးလားဟင် . . . .
အဲသလိုဝတ်ချင်တိုင်းဝတ်လို့ တင့်တယ် တယ်လို့ ထင်နေပုံပဲ။
မရှက်တတ်ရင် မရှက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများအထင်သေးမှာ သူများပစ်စလက်ခတ်ပြောမှာကို ကြောက် ဖို့တော့လိုတယ်။
မရှက်တော့တဲ့အတွက် ဘာကိုမှလဲ မကြောက်တော့ဘူးပေါ့
စိတ်ဝင်စားတဲ့ ညီညီ ကိုကို ဦးဦး တို့ အတွက် ညွှန်ချင်တဲ့ ဆိုက် ကလေး က တော့
..ဒီလိုမျိုး ဝတ်စားဆင်ယင်တာဟာ အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်ရာလည်းရောက်ပါတယ်ဗျာ။…
ကိုယ်ကအန္တရာယ်ဖိတ်ခေါ်တယ် ထင်နေမေမဲ့ သူတို့က လာဘ်ခေါ်တယ် ထင်ချင် ထင်နေမှာ။
ကြည့်လို့ ကောင်တယ်..။ ဒီအတိုင်းထားလိုက်..။ အငြိမ့်ထဲက လူရွှင်တော်တွေကပြောတာနော်..။
သူ့ကိုတော့ ပြောကို မပြောချင်တော့ဘူး …
တဖြေးဖြေးနဲ့ ပိုပိုဆိုးပြီး ပိုပို တိုလာလိုက်တာ … သူ့မိဘတွေက မပြောကြတော့ဘူး လား မသိဘူး။
ကိုယ်က မိန်းကလေး ပဲ ဒီလို မျိုး လက်လွတ်စပယ် နေရင် ဘယ်ယောင်္ကျားလေးက တန်ဖိုးထားတော့မလဲ အနုပညာရှင်မို့လို့ ခေတ်နဲ့ အညီဝတ်ရတာကို လက်ခံပါတယ် ။ ခေတ်လွန် သွားရင် တော့ မကောင်းတော့ဘူး ။ အခု လိုမျိုးကျတော့ ကြည့်ရတာ တော်တော့် ကို အဆင်မပြေသလို ခံစားရတယ် ….
နာမည်ကြီးမယ်ဆိုလျှင် ဘာဝတ်ဝတ်ရတယ် ဆိုတာမျိုးလား မသိဘူး … ။ နောက်ဆို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဝတ်တာမ၀တ်တာ ပြသနာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ကိုယ်တုံးလုံးတွေနဲ့များ လမ်းသလားနေတော့မလား မသိဘူး .. ။
သူတို့က ဒီလိုဝတ်ပြီး ဘော်ဒီဂတ်တွေ ဆွေမျိုးတသီကြီးနဲ့ ၀န်းရံသွားတာ..အန္တရာယ်မရှိဘူး …. အားကျမိတဲ့ မိန်းမများလိုက်ဝတ်ရင်သာ … @!#%& *^$!!!!!
ပုံတွေက ဒီဆိုက်မှာ … တစ်ယောက်ယောက် တင်ထားပြီးသားလို့ ထင်ပါတယ်နော် .. ။
ပြောရလျှင် ၀တ်ထားတာက ဂွမ်းသေးတယ် … အဲ့ဒီဆံထုံးနဲ့ အဲ့ဒီဝတ်စုံနဲ့ မလိုက်ဘူး .. အရှက်ပြေ ပိတ်စပါးပါးကလည်း အုပ်ထားသေးတယ် …သတ္တိရှိလျှင် အဲ့ဒီပိတ်စဖယ်လိုက် .. ။
အမှန်က အောက်ကခံထားတဲ့ ပိတ်စက ကွတ်တိခံထားတာလေ
သီချင်းဆိုရင်း Mood ပါသွားတော့ ဟိုပေါ်ဒီပေါ်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
ဒိပုံကိုမြင်ဖူးထားတာတော်တော်ကြာပြီ ဒီဆိုဒ်ထဲမှာပဲလေ ။
ဒီဆိုဒ်ထဲ ကစာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးး..ycpကိုမင်းပါဗျာ….
၀န်ခံတတ်ပါတယ်ဗျ…တချို့ စာတွေ ကမှီငြမ်းရတယ်လေ….
ဒီပွဲ ကိုအလှအပကြိုက်တဲ့ ..မိန်းမတိုင်းတော့ေ၇ာက်နိုင်တယ်လေဗျာ…….
လူတွေ သိပ်မသိကြသေးလို့ 
တစ်ကယ်တော့ ၀ိုင်းစုက အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်နေပြီနော်
ဝိုင်းစု ဝိုင်းစု … မြင်တာလေးဝိုင်းလုခံရဦးမယ် …
စာကတော့ ဒီဆိုဒ်ထဲကဟာ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ် shweaeimsi ရင်တွင်းဖြစ်ပဲဟာ ….
မိန်းကလေးတွေ အားကျပြီးလိုက်မဝတ်စေချင်တဲ့ စေတနာကိုလည်းနားလည်ပါတယ်
ဒီပုံတွေက ကြာကြာလှပေါ့…။ ဓာတ်ပုံက ဘားမားတူဒေးက ဆိုပါလား………သြော်….
ဖော်ချင်တိုင်းဖော် ကျော်ချင်တိုင်းကျော် နေကြပါတယ်။ ဖော်မှ ချွတ်မှ နာမည်ကြီးမယ်ထင်နေကြတယ် ထင်ပါတယ်။
ဖက်ရှင်ရှိုးကနေ ဖော်ရှင်ရှိုး….လိုတောင် ပြောင်းခေါ်ကြရပါတော့မည်။
၀ိုင်းစုတို. အနုပညာရှင်တွေလည်း ကမ္ဘာနဲ.အမှီ ရင်ဘောင်တန်းနေပါပြီခဗျ
နောက်ပိုင်းကျရင်တော. ဖင်ပြောင်ပြောင်နဲ. တန်းတော.မှာပါ
ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့သာတက်ဆိုပါလား ကမြင်းမ ရေ………..
စင်ပေါ်မှာ ခြင်ကိုက်တယ်ကြားလို့ ကမန်းကတန်း ပတ်လာတာဒဲ့
ဘယ်လိုမှမဖြစ်သင့်တာပါ… မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတဲ့ဗျာ…. မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို တော်တော်အရုပ်ဆိုးစေတာပဲ
ခုလို နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့ ယဉ်ကျေးမူကလည်း တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ယုတ်လာတယ်။ သူမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘေးပတ်ဝန်ကျင်က လူတွေကို တဆိတ်လောက် အချိန်လေး ပေးပြီး ကြည့်လိုက်ပါ။ မြန်မာ ယဉ်ကျေးမူ ပုဆိုးနဲ့ ထမီ ၀တ်ထားတဲ့ လူ တော်တော်လေး ရှားသွားပြီ။ စကတ်၊ ဘောင်ဘီ စသဖြင့်နဲ့ အစားထိုးလာကြတယ်။ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ကြပေမယ့် ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကော ကင်းကြရဲ့လားလို့ မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ စင်ပေါ်တက်ပြီး အခုလို ၀တ်စားထားတာက တော်တော်လေးဆိုတဲ့ အပြုအမူတစ်ခုလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ကိုယ့် အိမ် ကိုယ့် အခန်းထဲမှာ ဘယ်လို ၀တ်ဝတ် ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် လူသိများတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ကို အားပေးနေတဲ့ ပရိတ်သတ်ကို အတုခိုးမှားအောင် ၀တ်ထားတာကတော့ ရိုင်းတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ သူက ဥရောပကို အားကျနေတာလား မသိဘူး။
သူများကို အပြစ်ပြောချင်ရင် အရင်ကိုယ့်မိသားစု ကိ်ုယ့်ပတ်ဝန်ကျင်ကို ပြောဆိုဆုံးမပေါ့ကွာ… အဲဒီလို သူများကို အပစ်ပြောနေကြတဲ့ သူများတစ်ဆိတ်လောက် ကို့အမ၊ကို့ညီမ၊ကို့တူမ၊ကိုခယ်မ၊ကို့မိန်းမ၊ကို့ဆွေမျိုးသားချင်း ကို့သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေကိုပဲ အရင် အဲလိုတွေမ၀တ်မိစေဖို့ အရင်ပြောပါဦး တော်ကြာ ကိုယ်ကတော့ သူများကိုပြောလို့ ကိုညီမ…….. တွေက ဒါထက်တောင်ပိုဆိုးနေဦးမယ်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာတော့ အမလေး ရှက်စရာ၊ရွံစရာဆိုပီး နောက်ကွယ်ကျမှ သူတောင်ဝတ်တာ ငါက ပိုလှတယ် ငါလည်း ၀တ်ပီးပြမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေများကြီးနော်….ကဲ အကြံပေးတာပါ။သူများက ၀တ်ပီးလို့ ပုံတွေတောင် ထွက်တာကြာလှပီ သူငယ်ချင်းတို့ အကုသိုလ်များနေလို့ စိတ်ဖြေသ်ိမ့်နိုင်အောင် ပြောပြပေးတာနော် ကဲ အကုသိုလ်တွေ ငြိမ်းကျပါစေ………